Maalinta: Ogast 29, 2017
Mayor Mayor Topbas wuxuu soo booqday goobta qashinka ee qadiimka ah ee Saldhigga Beeshiktaş
Duqa magaalada Kadir Topbaş, oo booqday aagga qodista qadiimiga ah ee Saldhigga Beşiktaş oo ay la socdaan xubnaha saxaafadda, ayaa yiri: Waxaan qorsheyneynaa inaan furo Mecidiyeköy-Mahmutbey inta u dhaxaysa qeybta labaad ee 82,5. Stone-Mecidiyekoy [More ...]
Dib u hagaajinta jidadka tareenada ee Croatia
Guddiga Yurub wuxuu soo saaray go'aan ku saabsan maalgalinta 145 milyan Euro ee dayactirka qadka tareenka ee u dhexeeya Dugo Selo iyo Krizevci iyada oo la raacayo Sanduuqa Wadajirka ee daboolaya muddada maaliyadeed ee 2014-2020. Krizevci-Dugo Selo line, [More ...]
Degmada Şanlıurfa waxay sii wadaysaa hal-abuurnimadeeda dhanka gaadiidka waxayna furi doontaa xilli cusub oo gaadiidka dadweynaha ah iyadoo la iibsanayo basaska cusub ee 65. Duqa Magaalada 11 ee Dowlada Hoose ayaa rajeynaya in basaska la furi doono bisha Sebtember ay faa'iido yeelan doonaan [More ...]
Gaadiidka dadweynaha ee bilaashka ah ee Erzurum
Magaalada Erzurum, gaadiidka dadweynaha ayaa xor noqon doona maalinta koowaad ee Ciidul Adxaa. Maalinta ugu horeysa ee xaflada, basaska Dawlada Hoose, basaska dadweynaha ee gaarka loo leeyahay iyo basaska yar yar ee ka shaqeeya khadka magaalada ayaa muwaadiniinta u adeegsan doona si lacag la’aan ah. Magaalada Weyn ee Erzurum [More ...]
Baska iyo Maqalka Bilaashka ah xilliga Quduuska ah ee Sacuudiinta
Dowladda Hoose ee Magaalada Adana, ayaa muwaadiniinta u sameysa dariiqa raaxada leh ee lagu booqdo qabuuraha la qorsheeyay. Buruk, Kabasakal, Asri, Kucukoba iyo Akkapi qabuuraha ee basaska dawlada hoose waxay sameyn doonaan duulimaadyo giraanta lacag la’aan ah ayaa lagu yiri. [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Muğla
Gawaarida dadweynaha ee Magaalada Muğla ee MUTTAŞ gaadiidleyda dadweynaha waxay bixiyaan adeegyo gaadiid dadweyne oo lacag la'aan ah maalmaha iyo xilliyada ciidaha. Gaadiidka dadweynaha ee gaarka loo leeyahay (ÖTTA) ayaa sii wada duulimaadyadeeda joogtada ah iyo [More ...]
Labadii maalmood ee ugu horreeyay Ciidul Adxaa, basaska dadweynaha ee Çankırı waxay sidoo kale bixin doonaan adeegyo bilaash ah. Maalinta Arefe inta u dhaxaysa 13.00 iyo 17.30 National Will Square (horteeda degmada) oo laga soo qaadayo qabuuraha magaalada ayaa laga saarayaa gaariga. Çankırı [More ...]
Gaadiidka Bayramda iyo Parkomats oo lacag la'aan ah Kocaeli
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, inta lagu guda jiro Ciidda Adxaa waxay muwaadiniintu la kulmi doonaan asxaabtooda iyo qaraabadooda si ay ugu bixiyaan adeegga gaadiid ee bilaashka ah. Macnaha guud, go'aanka Kocaeli Metropolitan Council Dawladda Hoose, muwaadiniinta 31 August [More ...]
Injiilka Gaadiidka ee Izmir
Basaska, doonyaha iyo safarada nidaamka tareenka ee Izmir inta lagu gudajiro Ciidda Sanadka waxaa laga dhimayaa X XXXX “. Basaska loo qoondeeyey booqashooyinka xabaalaha waxay sidoo kale sameyn doonaan duullimaadyo bilaash ah. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, dhibbanayaasha Izmir [More ...]
Markaan eegno filimka gadaal gadaalna aan u maleynaynin inaysan macquul aheyn in la fikiro: Bursa oo sugeysa tareen leh rajo weyn sanado waa magaalo aad u samir badan. Wax walba way cadahay Tallaabooyinka koowaad ee hoos imanaya isbahaysiga DYP-SHP ee 1991 [More ...]
Darawalada tagaasida tagaasida ee Gar Taxi, oo sugaya rakaabka hortiisa Tareenka Sare ee Xawaaraha Sare (YHT), oo shaqada la galiyay sanadkii hore, ayaa sheegay in ganaaxa taraafikada la jaray isla markaana ay la kulmeen caro aad u weyn. Meel u dhig meel istaag Celal Bayar Boulevard [More ...]
Tareenka Rakaabka ah ee lagu sii gudbo Heerka Joogitaanka ee Magaalada Adana
Tareenka rakaabka ah ayaa ku dhuftay gaariga heerka isgoyska Adana. Darawalka gaariga ayaa shilka si dirqi ah uga badbaaday. Sida ay sheegayaan wararka la helay, tareenka oo siday rakaab ka yimid Adana kuna sii jeeday Mersin, bartamaha degmada Seyhan ee B districtyükdikili [More ...]
Eminönü-Eyüp-Alibeyköy Tram Line Pile 42 ee Geeska Dhexe
Mashiinka mitirka ee 150 70 ayaa laga taagay Daanta Dahabka ah iyada oo loo eegayo baaxadda jidadka cusub ee taraafikada oo ka fidi doona Eyüp illaa Eminönü iyada oo miisaaniyaddii 42 milyan oo doolar ay ku wareejisay Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM). 2019 ayaa la bilaabi doonaa iyo 10 bin 500 [More ...]